Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Wargaysada Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Jimce Ah. - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Wargaysada Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Jimce Ah.
Asalaamu calaykum, idilkiinba salaan akhristayasha sharafta lahow kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii ay wargaysyada Yurub ka qoreen maanta oo Jimce ah.
Shabakada Gool24 oo aad uga barateen in ay marakasta si joogto ah idiinla socodsiiso wararka suuqa ayaa halkan idiinku soo ururisay wararkii ugu danbeeyay ee suuqa iyo waxyaabihii ay maanta oo Jimce ah ka qoreen xidigaha la kala doonayo.
Daniel James ayaa ka gudbay tijaabada caafimaadka Manchester United isaga oo todobaadkii mushaar ahaan United uga qaadan doona 67,000 kun oo gini halka uu markii hore 4000 kun oo kaliya waxaana hadda heshiiskiis United ka hadhsan in si rasmi ah loogu dhawaaqo.
Neymar Jr ayaa iska diiday fursada uu Real Madrid ugu biiri kari lahaa wuxuuna u sheegay in Barcelona oo kaliya uu ugu bixi karo kooxda uu hadda ka tirsan yahay ee Paris Saint-Germain.
SIDOO KALE AKHRISO: RASMI: Guardiola Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqay Kabtanka Cusub Ee Ay Ciyaartoyda Kooxdiisu Soo Doorteen Iyo Saddexdiisa Ku Xigeen Oo La Shaaciyay.
Manchester United ayaa kooxda Leicester City wax ka waydiisay difaaca Harry Maguire,laakiin waxay aaminsan yihiin in xidiga reer England uu doonayo ku biirista Manchester City.
Difaaca Manchester United aan waqtiga fiican ku haysan ee Matteo Darmian ayaa xiisa ka helaya kooxda Valencia oo wada xaajood la furtay United.
Kooxda Wolves ayaa diyaar u ah in ay isku taagto sidii ay Liverpool ugala soo wareegi lahayd da’yarka 19 sano jirka ah ee Rafael Camacho kaas oo iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo Reds.
Tottenham ayaa Danny Rose u soo bandhigi karta in uu Everton si ay uga hesho bartilmaameedkooda kowaad ee Lucas Digne.
Manchester United ayaa dalab £100m milyan gini ah ka gudbisay difaaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly kaas oo waqti dheer ay Reds Devils doonaysay in ay la soo wareegto.
Frenkie de Jong ayaa saaxiibkiisa xulka Holland iyo kooxda Ajax ee Mattijs de Ligt kula taliyay in uu iska diido Manchester United isaga oo muujiyay sida uu u jeclaan lahaa in uu Barcelona kula soo biiro.
Liverpool ayaa qorshaynaysa in ay kharsh garaynta suuqa kooxdeeda ee xagaagan ka bilawdo soo xero galinta 21 sano jirka kooxda Fiorentina ee Federico Chiesa.
Manchester City ayaa fursad cusub ka heli karta kooxda Juventus iyada oo Joao Cancelo uu Etihad Stadium ku soo biiri karo halka Danilo oo Man City ka tirsani uu Turin u wareegi karo suuqa xagaagan.
Xidiga ay xiisaynayaan kooxaha Manchester United, Liverpool iyo Tottenham ee James Maddison ayaa kooxdiisa Leicester City u sheegay in uu doonayo sidii uu kooxdiisa u sii joogi lahaa.
Chelsea ayaa kooxdeeda dib ugu soo celin karta difaaca dhexe ee Kurt Zouma oo amaah ugu maqnaa Everton maadaama oo ay Blues ganaax kaga jirto suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Arsenal ayaa go’aan ku gaadhay in ayna la soo saxiixan difaaca da’yarka ah ee kooxda Saint-Etienne ee William Saliba wuxuuna go’aanka Gunners albaabka u furayaa Man City oo 18 sano jirkan doonaysa.
SIDOO KALE AKHRISO: Twitter Oo Si Gaar Ah Isha Ugu Hayn Doonta Akoonada 50 Ciyaartoy Oo Madow Ah & Paul Pogba Oo U Sabab Ah
Liverpool iyo saddex kooxood oo kale oo Premier league ah ayaa la sheegay in ay la xidhiidheen kooxda Lyon si ay ula soo saxiixdaan gool dhaliyaha Moussa Dembele.
Kooxda Premier league u soo dalacday ee Aston Villa ayaa doonaysa in ay heshiisyo rasmi ah ka saxiixato xidigihii heerka labaad ka soo saaray ee Kortney Hause iyo Anwar El Ghazi iyada oo El Ghazi kooxda Lille kagala wareegi karta 8m.
Tottenham ayaa loo soo bandhigay saxiixa xidiga kooxda PSG iyo xulka qaranka Germany ee Julian Draxler oo 25 sano jir ah kaas oo ay suurtogal tahay in uu Spurs badal ugu noqdo Christian Eriksen iyada oo 27 jirka reer Denmark uu shaaciyay in uu baxayo.
Riix 2 si aad u akhrisato wararka kale ee ay wargaysyada Yurub qoreen: